यी नेपाली युवतीको हेर्नै नसकिने भिडियो संसारभर भाइरल, आखिर किन यस्तो छाडा, रहर कि बाध्यता? (भिडियो सहित) – Gandaki Chhadke
यी नेपाली युवतीको हेर्नै नसकिने भिडियो संसारभर भाइरल, आखिर किन यस्तो छाडा, रहर कि बाध्यता? (भिडियो सहित)
By गण्डकी छड्के On Nov 19, 2021
एजेन्सी । निकै नै सुन्दर एक युवतीको होटेलमा एक विदेशी युवकको साथ रेकर्ड भएको भिडियो संसारभर भाइरल बनेको छ । ती युवती कुनै होटेलको विस्तारमा युवकसँगै छिन ।
हिन्दी भाषा प्रयोग गरेका सो युवकले यसरी भिडियो खिचिरहँदा पनि उनि मस्तले केटाकै अँगालोमा बाँधिएर विस्तारामा रमाइरहेकिछिन् । बेला बेला अर्कि नेपाली दिदीलाइ सम्बोधन गर्दै हेर्नु न यस्ले त मलाइ मा’र्नै लाग्यो भन्दै नेपालीमा बोलिरहेकि छिन् ।
‘बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिँड ।’ सामाजिक सञ्जालको प्रयोग/दुरुपयोगको प्रसंगमा यो नेपाली उखान ठ्याक्कै मिल्छ । अहिले अधिकांश फेसबुक, ट्वीटर, इन्टाग्राम आदिको पहुँचमा छन् । यी माध्यामहरु आफैमा खराब छैनन् । डरलाग्दा छ्रैनन् ।
किनभने कतिपय यही माध्याम अपनाएर सामाजिक सेवाका कामहरु गरेका छन् । कतिले जीवनदान पाएका छन् । कतिले भविष्य उज्वल बनाएका छन् । कतिले अर्थोपार्जन गरेका छन् । कतिले नेम र फेम कमाएका छन् ।तर, अर्काथरी छन् जसले सामाजिक संजालको व्यापक दुरुपयोग गरेका छन् ।
यिनीहरुको विकारग्रत मनोवृत्तिलाई सामाजिक सञ्जाल ‘बाँदरलाई भर्‍याङ’ जस्तै भएको छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले हाम्रै सामाजलाई पनि नराम्ररी ध्वस्त बनाइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालको साइड इफेक्ट दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि परेको छ । हुन त कतिपय सामाजिक सञ्जालकै माध्यामबाट जोडिएका छन् ।
विवाह गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालले नै उनीहरुको दुरी मेटाइदिएको छ ।तर, कतिपय दम्पतीको सम्बन्धमा खटपट ल्याउने माध्याम पनि सामाजिक सञ्जाल नै बनेको छ । सामाजिक सञ्जालप्रतिको क्रेज र दुरुपयोगले कतिपय दम्पतीको सयन कक्ष चिसिदैछ ।
त्यतीमात्र होइन, उनीहरुको सम्बन्ध टुटेको पनि छ । जीवनभर नछुट्ने कसम खाएर जोडिएका यस्ता सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जाल त्यस्तो विकार बनेर प्रवेश गरेको छ, जसले उनीहरुलाई फेरि कहिल्यै नभेट्नेगरी अलग गराइदिएको छ । यही कारण राम्रो घरबार, छोराछोरी, परिवार विक्षिप्त बनाइदिएको छ ।
अहिले धेरैजसो दम्पती शोसल मिडियामा रमाइरहेका हुन्छन् । फेसबुक, ट्वीटरमा उनीहरु आफ्नो भावना व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् । सोशल मिडियामार्फत भर्चुअल साथीसँग अन्र्तसंवाद गरिरहेका हुन्छन् । यो क्रेज कतिसम्म छ भने उनीहरुले आफ्नो परिवार वा पार्टनरलाई समय दिन सकिरहेका छैनन् ।
वा आवश्यक ठानिरहेका छै्रनन् । सोशल मिडियाको बढ्दो क्रेजले दम्पतीको सम्बन्धलाई धरापमा पार्दै लगेको छ । यसले दाम्पत्य सम्बन्धमा दुरी पैदा गरेको छ । हालै गरिएको एक अध्ययनले पनि यसलाई थप पुष्टि गरेको छ ।भिडियो
चिसो माैसमलाई चुनाैती, होस्ट ओशिन सिटौलाको हट अवतार, हेराैँ तस्बिरहरू
अहिलेको जनगणनामा बाहुनको सँख्या बढ्यो भने तथ्याङ्क विभागमा आ’गो लगाईदिन्छौ – आङकाजी…